अत्यधिक रक्सी पिउनेका लागि गाँजा लाभदायक
काठमाडौं, १७ कात्तिक । विश्वभर अत्यधिक मध्यपानका कारण वर्षेनी लाखौं मानिसले ज्यान गुमाउने गर्छन् । अत्यधिक रक्सी सेवन कलेजो, पाचन प्रणाली, मृगौलालगायतका अंङ्गका लागि घातक मानिन्छ ।
मध्यपानले पारिवारिक विग्रह मात्रै होइन, डिप्रेशन समेत निम्त्याउने गर्छ । रक्सी छोड्नका लागि मानिसले अल्टेजोन, एकामप्रोसेट डाइसुल फिराम र टोपिरामेट जस्ता औषधि समेत सेवन गरेको पाइन्छ ।
यता गाँजालाई समेत लागू औषधको रुपमा लिने गरिन्छ । तर विभिन्न अध्ययनले गाँजा औषधि समेत हो भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ
गाँजा सेवनबाट पेटमा जलन हुने, उच्च रक्तचाप कम हुने र क्यान्सर जस्ता घातक रोगको जोखिम कम हुने गर्छ । अध्यधिक रक्सी सेवनबाट उत्पन्न हुने स्वास्थ्य समस्या र रोगका लागि समेत गाँजा लाभदायक मानिन्छ । अत्यधिक मध्यपान गर्ने व्यक्तिका लागि गाँजा निकै लाभदायक हुने हालै अमेरिकामा गरिएको एक अनुसन्धानले समेत पुष्टि गरेको छ ।
अत्यधिक रक्सी सेवनले हाम्रो कलेजोलाई निकै कमजोर बनाउने गर्छ । तर रक्सी सेवनबाट कमजोर बनेको कलेजोका लागि गाँजा अमृत समान हुने म्यासाचुसेट्सस्थित नर्थ शोर मेडिकल सेन्टरका चिकित्सकको एक टोलीले गरेको अध्ययनले प्रमाणित गरेको छ ।
डा. अदेयिङ्का चार्ल्स अदेजुमोले नेतृत्व गरेको अध्ययन टोलीले अत्यधिक रक्सी सेवन गर्ने ३ लाख २० हजार व्यक्तिमाथि गाँजाको प्रभावबारे परीक्षण गरेको थियो । अध्ययनमा सहभागीमध्ये ९० प्रतिशतले कहिल्यै गाँजा सेवन गरेका थिएनन् भने बाँकीले सेवन गरेका थिए । गाँजा सेवन गर्नेमध्ये ८ प्रतिशतले नियमित जस्तै गाँजा सेवन र बाँकी २ प्रतिशतले बेलाबेला सेवन गरेका थिए ।
लामो अध्ययन र परीक्षणबाट रक्सीसहित गाँजा पनि सेवन गर्ने व्यक्तिमा कलेजोमा बोसो जम्ने ‘स्टियाटोसिस’ नामक समस्या कम हुने पाइएको थियो । रक्सीसहित गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिमा स्टियाटोसिसको जोखिम ४५ प्रतिशतले कम हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै कलेजोमा लाग्ने सिरोसिस नामक क्यान्सरको जोखिमसहित अन्य समस्या उत्पन्न हुने खतरा समेत कम हुने अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् । गाँजा सेवनबाट कलेजोमा दाग देखिने र कलेजोले काम नै गर्न नसक्ने सिरोसिस नामक रोगको जोखिम ५५ प्रतिशत कम हुने अनुसन्धानका क्रममा गरिएको परीक्षणले पुष्टि गरेको छ ।
यता कलेजोमा बोसो जम्ने ‘स्टियाटोहेपाटाइटिस’ को जोखिम समेत गाँजा सेवन गर्ने व्यक्तिमा ४३ प्रतिशत हुने गर्छ । गाँजामा हुने तत्वले कलेजोमा बोसो जम्न नदिने र रोग लाग्ने जोखिम समेत कम हुने गर्छ । साथै कलेजोमा लाग्ने ‘हेपाटोसेलुलर कार्निनोमा’ नामक क्यान्सरको जोखिम ३८ प्रतिशतले कम हुने गर्छ ।
गाँजामा प्रति जलन तत्व(एन्टिइन्फ्लेमेटरी प्रोपर्टी) बढी हुने भएकाले समेत रक्सी सेवन गर्ने व्यक्तिका लागि यो लाभदायक हुने उनीहरुको भनाइ छ । यद्यपि, रक्सी र गाँजाको मिश्रण लाभदायक हुनु पछाडिको कारणबारे थप अनुसन्धान र परीक्षण गर्नुपर्ने चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।
अध्ययनको निष्कर्ष लिभर इन्टरनेशनल नामक जर्लनमा प्रकाशित गरिएको छ । ‘गाँजामा प्रति जलन तत्व हुने गर्छ तर यसको सेवनले रक्सी सेवनबाट उत्पन्न हुने रोग कम हुनुका कारणबारे अझै प्रस्ट भइसकेको छैन’, उक्त जर्लनमा लेखिएकव छ ।
तर गाँजाको कुन भाग उपयुक्त हुन्छ भनेर थप परीक्षण गर्नुपर्ने एकजना अनुसन्धानकर्ता डा. टेरेन्स बुकोङ बताउँछन् । ‘गाँजाको कुन भाग प्रयोग गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भनेर निश्चित गर्न बाँकी नै छ’, डा. बुकोङले भने, ‘गाँजाको कुन भाग पचाउन सक्छन्, गाँजा कति खाने र कसरी खाने भनेर समेत प्रस्ट भइसकेको छैन ।’
यसबाहेक, अध्यधिक रक्सी सेवनबाट उत्पन्न हुने मानसिक तनाव र शारीरिक जलन कम गर्न समेत गाँजा उपयोगी मानिन्छ । गाँजामा हुने ‘टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल’ नामक तत्वले मानसिक तनाव कम गर्छ । साथै गाँजा सेवनबाट महिनावारी हुँदा अत्यधिक रक्तश्राव हुने र पेट दुख्ने समस्यादेखि डण्डिफोरबाट समेत राहत मिल्छ ।
गाँजा सेवनबाट धेरै फाइदा छन् । तर अत्यधिक रक्सी पिउने लत नै बसेकाले गाँजा सेवन गर्दा रक्सी छोड्न सक्छन् त भनेर अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ । कुनै-कुनै अवस्थामा गाँजा सेवन गर्न लागेपछि पुनः रक्सी सेवनको दर थप बढ्ने अवस्था समेत आउन सक्नेप्रति डा. बुकोङले सचेत गराए ।
‘गाँजा सेवनबाट रक्सीको लत नै छुटाउन सकिन्छ भन्नेबारे हामीहरु प्रस्ट भइसकेका छैनौं’, बुकोङले भने, ‘कलेजोसम्बन्धी कुन रोगका लागि गाँजा लाभदायक हुन्छ भन्ने कुरालाई नै हामीले बढी जोड दिएका छौं ।’